Umthetho we-ICT | Law & More BV | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Njengomphumela wokusungulwa kwe-intanethi, sekuvele imibuzo eminingi yezomthetho. Lokhu kwalandelwa ukufakwa komthetho we-ICT. Umthetho we-ICT unokuhlobana okuningi nezinye izindawo zomthetho, njengomthetho wesivumelwano, umthetho wobumfihlo kanye nomthetho wepropathi yobuhlakani. Kuzo zonke lezi zindawo zomthetho, kungavela imibuzo ephathelene nomthetho we-ICT. Le mibuzo ingaba yile elandelayo: 'kungenzeka yini ukubuyisa okuthile engikuthenge ku-inthanethi?', 'Yini amalungelo ami uma usebenzisa i-inthanethi futhi avikeleka kanjani la malungelo?' futhi 'ingabe okuqukethwe kwami ​​ku-inthanethi kuvikelwe ngaphansi komthetho we-copyright?' Kodwa-ke, umthetho we-ICT ngokwawo ungahlukaniswa ngezindawo ezithile zomthetho we-ICT, njengomthetho wesoftware, umthetho wokuphepha kanye ne-e-commerce.
NGESIDINGO SOMLAYELI WE-ITC?
Njengomphumela wokusungulwa kwe-intanethi, sekuvele imibuzo eminingi yezomthetho.
> Umthetho Wezokuphepha
> I-SAAS nefu
> Izivumelwano ze-IT
> Izikimu Zokuqhubeka & Escrow
> Umthetho Wezitolo zeWebhu
> Ukusingathwa nokuqamba
> Isoftware Yezimboni
Lokhu kwalandelwa ukufakwa komthetho we-ICT. Umthetho we-ICT unokuhlobana okuningi nezinye izindawo zomthetho, njengomthetho wesivumelwano, umthetho wobumfihlo kanye nomthetho wepropathi yobuhlakani. Kuzo zonke lezi zindawo zomthetho, kungavela imibuzo ephathelene nomthetho we-ICT. Le mibuzo ingaba yile elandelayo: 'kungenzeka yini ukubuyisa okuthile engikuthenge ku-inthanethi?', 'Yini amalungelo ami uma usebenzisa i-inthanethi futhi avikeleka kanjani la malungelo?' futhi 'ingabe okuqukethwe kwami ​​ku-inthanethi kuvikelwe ngaphansi komthetho we-copyright?' Kodwa-ke, umthetho we-ICT ngokwawo ungahlukaniswa ngezindawo ezithile zomthetho we-ICT, njengomthetho wesoftware, umthetho wokuphepha kanye ne-e-commerce.
Ithimba le Law & More Unolwazi olucacile maqondana nomthetho we-ICT nangokuphathelene nezindawo zomthetho ezixhumana nomthetho we-ICT. Ngakho-ke, abameli bethu bangakunika izeluleko mayelana nezihloko ezilandelayo:
• Umthetho wokuphepha;
• I-SaaS nefu;
• Izinkontileka ze-IT;
• Ukuqhubeka kwamalungiselelo ne-escrow;
• Umthetho wokhula;
• Ukusingathwa kwendawo yokubambela;
• Isoftware yomthombo ovulekile;
• Isoftware Yezimboni.
Umthetho Wezokuphepha uwumkhakha wezomthetho obhekene nokuvikelwa kwemininingwane. Izihloko ezingajwayelekile kulo mkhakha wezomthetho zifaka amagciwane ekhompyutha, ukungena ngaphakathi kwekhompyutha, ukuqhekeza kanye nokuqanjwa kwemininingwane. Ukugcina imininingwane ebucayi neyimfihlo iphephile, kunesethi ephelele yezinyathelo ezingabakhona. Isibonelo, izinkampani ngokwazo zivame ukusebenzisa izindlela ezingekho emthethweni ngokususelwa ekuhlaziyweni kwengozi. Kodwa-ke, lokhu kuvikela kunesisekelo esingokomthetho. Ngemuva kwakho konke, yisishayamthetho esinquma ukuthi lezi zindlela zokuphepha kufanele siqine kangakanani.
Lapho ucabanga ngezinyathelo zomthetho umuntu angacabanga nange-'Wet bescherming Persoonsgegevens '(Umthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane Yabantu). Umthetho Wokuvikelwa Kwemininingwane Yabantu uthi kumele kucace ukuthi yiziphi izindlela ezithathiwe ukuvikela idatha yomuntu siqu ekulahlekelweni noma ekusebenzeni okungekho emthethweni. Lokhu kungafaka ukuxhumana okubhalwe phansi phakathi kweseva nesivakashi: ukuxhumana kwe-SSL. Amaphasiwedi nawo ayingxenye yokuphepha okunjalo.
Ngaphandle koMthetho Wokuvikelwa Kwedatha Yakho, ezinye izinto zenziwa nobugebengu. Ukugenca kungukujeziswa ngesisekelo sendatshana engu-128ab yeKhodi Yezwe YaseDashi.
Ukuvikela imininingwane yakho, kubalulekile ukwazi ukuthi ukuphepha kwemininingwane kusebenza kanjani nokuthi ungayivikela kanjani idatha yakho neyomunye umuntu ngendlela ephephile ngangokunokwenzeka. Law & More angakweluleka ngezici ezingokomthetho zokuphepha kolwazi.
I-Software njengeSevisi, noma i-SaaS, yisoftware enikezwa njengensizakalo. Kwensizakalo enjalo, umsebenzisi akadingi ukuthenga isoftware, kepha angangena kwi-SaaS nge-inthanethi. Inzuzo yezinsizakalo ze-SaaS ukuthi izindleko zomsebenzisi ziphansi.
Insizakalo ye-SaaS efana ne-Dropbox iyisevisi yamafu. Insizakalo yefu yenethiwekhi lapho imininingwane igcinwa khona ku-Cloud. Umsebenzisi akuyona umnikazi wefu futhi ngakho-ke awunasibopho sokulondolozwa kwalo. Umhlinzeki wefu unesibopho sefu. Izinsizakalo zefu ziboshwe futhi emithethweni ethile, okuyimithetho ehlobene nobumfihlo ikakhulukazi.
Law & More ingakweluleka nge-SaaS yakho nezinsizakalo zamafu. Abameli bethu banolwazi nesipiliyoni kulo mkhakha wezomthetho, ngenxa yalokho abangakusiza ngayo yonke imibuzo yakho.
Njengomphumela wezwe lethu ledijithali, izinkampani eziningi ziye zathembela ekusebenzeni kahle kobuchwepheshe bolwazi. Ngenxa yalokhu kuthuthukiswa, kuya ngokuya kubaluleke kakhulu ukuba nezindaba ezithile ze-IT zihlelwe kahle. Isibonelo, ngokuthengwa kwe-Hardware noma ilayisense yesoftware, kufanele kwakhiwe inkontileka ye-IT.
Izinkontileka ze-IT, njengoba negama libonisa, izinkontileka "ezijwayelekile" ezifana nemibandela yokuthenga ejwayelekile, isitatimende sobumfihlo, izinkontileka zomsebenzi, izivumelwano zesoftware, izivumelwano ze-SaaS, izivumelwano zefu kanye nezivumelwano ze-escrow. Esivumelwaneni esinjalo, kwenziwa izivumelwano maqondana, ngokwesibonelo, inani, iwaranti noma isikweletu maqondana nokuhle noma nensizakalo.
Kungenzeka kube nezinkinga lapho ubhala noma uhambisana nenkontileka ye-IT. Lapho, ngokwesibonelo, kungaba nokungaqiniseki ukuthi yini okufanele ihanjiswe noma ngaphansi kwemigomo ethile ethize. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi kwenziwe amalungiselelo acacile nokuthi la malungiselelo abhalwe kusivumelwano.
Law & More angakweluleka ngazo zonke izinkontileka zakho ze-IT. Sizohlola isimo sakho futhi singabhala inkontileka yangokwezifiso yekhwalithi yomsindo yokuhlangabezana nezidingo zakho.
Izikimu Zokuqhubeka & Escrow
Kwabasebenzisi bobuchwepheshe bolwazi kubalulekile ukuthi bangaqiniseka ukuthi isoftware yabo kanye nedatha bangaqhubeka nokusetshenziswa. Uhlelo lokuqhubeka lunganikeza isisombululo. Isikimu sokuqhubeka okunjalo sizokuqedwa ngokubambisana nomhlinzeki wesevisi we-IT. Lokhu kusho ukuthi, Uma kwenzeka ngokwesibonelo ukuqothuka, izinsizakalo ze-IT zingaqhubeka.
Ngenhloso yokusungula uhlelo lokuqhubeka, kuzodingeka ukubheka uhlobo lwensizakalo ye-IT. Kwesinye isikhathi uhlelo lwe-escrow scheme luzokwanela, kanti kwezinye izimo kuzodingeka ukuthi kwenziwe amanye amalungiselelo. Uma kwenzeka ukuqhubeka kwe-Cloud eyodwa isibonelo kufanele sikhumbule bobabili abahlinzeki kanye nabahlinzeki abasingathile.
Uhlelo lokuqhubeka lubalulekile ekugcineni idatha yakho. Law & More angakweluleka ngezinhlelo zokuqhubeka. Singakusiza ekubhaleni uhlelo olunjalo ukuze uvikele isoftware yakho nedatha.
Umthetho Wezitolo zeWebhu
Ama-Webshops abhekene nenani elikhulu lezinhlaka zezomthetho adinga ukulandela zona. Ukuthengiswa kwebanga, amalungelo abathengi, umthetho wamakhukhi, izikhombisi-ndlela zaseYurophu nokuningi kuyizici zomthetho lapho i-webshop izobhekana nayo. Igama elithi 'umthetho wesitolo sewebhu' linikeza isikhathi esibandakanya konke salokhu.
Ngenxa yemithetho eminingi, kungenzeka ukuthi ngesinye isikhathi "ungakwazi ukubona izinkuni zezihlahla". Ngabe kufanele ngisebenzise imigomo nemibandela? Ukhumbula kanjani umsebenzi wekhasimende? Yiluphi ulwazi okufanele ngilunikeze kwiwebhusayithi yami? Yimiphi imithetho maqondana nokukhokha? Kuthiwani ngomthetho wamakhukhi? Yini okufanele ngiyenze ngemininingwane yomuntu engiyitholile esitolo sami sewebhu? Lokhu kukhethiwe kwemibuzo umnikazi wesitolo sewebhu engahlangabezana nayo.
Kubalulekile ukuthi lezi zinto zihlelwe kahle. Ngaphandle kwalokho, ungafaka engcupheni inhlawulo. Lezi zinhlawulo zingafinyelela ubude obukhulu futhi zingaba nomthelela enkampanini yakho. Ukwazi kahle ngalezi zinto kuzonciphisa ubungozi bakho.
Law & More angakweluleka ngokulandela kwakho umthetho ofanele. Ngaphezu kwalokho, singakusiza ukuthi ulobe imibhalo engokomthetho efanelekile esitolo sakho sewebhu.
Lapho umuntu ephethe noma efisa ukusingatha iwebhusayithi, umuntu kufanele azikhumbule izinhlinzeko zomthetho ezisebenzayo. Lapho usingatha iwebhusayithi, idatha izogcinwa futhi kwesinye isikhathi idluliselwe nakwezinye. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi udinga ukuphatha kanjani le div-á-vis yedatha yakho, kepha futhi nakubantu besithathu.
Kuzofanela ube nemigomo ecacile maqondana nokubamba kwakho kanye nezinto zalo ezingokomthetho. Kubalulekile ukuthi amakhasimende azi ukuthi kwenzekani ngemininingwane yawo. Amakhasimende akubona kubalulekile ukuthi idatha yawo ivikelwe ngokucophelela. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ngubani onecala uma kwephulwa imithetho yedatha.
Ngabe uyadingeka ukuvikela ubumfihlo bamakhasimende akho? Ngabe udinga ukunikeza imininingwane yokuxhumana uma lokhu kucelwe ngamaphoyisa? Ingabe unesibopho sokuvikela idatha kanye nokwephulwa kwedatha? Abameli bethu bangaphendula yonke le mibuzo neminye imibuzo. Mhlawumbe unemibuzo, ungahlala uthintana nomunye wabameli be Law & More.
Kulezi zinsuku, kungakucabanga ukuhlala emhlabeni ongenasoftware. Umthetho wesoftware ubalulekile kubo bobabili abathuthukisi be-software nabasebenzisi be-software.
I-'Auteurswet '(Umthetho Wobunikazi) icacisa ukuthi ngubani ongumnikazi wesoftware ethile. Esezenzweni, noma kunjalo, akuhlali kucace ukuthi ngubani ongumnikazi wesoftware futhi ngenxa yalokho ungumnikazi wamalungelo okushicilela. Abathuthukisi beSoftware abathengisa umkhiqizo wabo, imvamisa bafuna ukugcina amalungelo abo okushicilela. Lokhu kukhawulela amathuba okuba abasebenzisi be-software bashintshe isoftware. Kuba nzima ngokwengeziwe lapho umsebenzisi efuna ukuthuthukisa (eyakhe) isoftware. Ngubani ozobe esethola ama-copyright?
Ukunciphisa ubungozi bakho, kubalulekile ukunquma kusengaphambili ukuthi ubani ozothola amalungelo obunikazi. Law & More ingakweluleka ngomthetho wesoftware futhi ingaphendula imibuzo yakho maqondana nale nkundla yomthetho.
Endabeni yesoftware yomthombo ovulekile, umsebenzisi uthola ikhodi yomthombo yesoftware lapho uthenga ilayisense. Lokhu kunenzuzo yokuthi abasebenzisi bangenza ngokwezifiso futhi bathuthukise isoftware ukuze isoftware iqhubeke ikhula. Emcabangweni, lokhu kuzwakala kunenzuzo futhi kusebenza ngendlela efanele: noma ngubani onolwazi ngamakhodi angahlela isoftware yomthombo ovulekile.
Ekusebenzeni, noma kunjalo, kubaluleke kakhulu ukusetha imithetho ethile yokusebenzisa isoftware yomthombo ovulekile, ukulawula nokucacisa ukusetshenziswa kwesoftware yomthombo ovulekile. Lokhu kubaluleke kakhulu manje akukho ukubhekwa okuncane, ngenkathi izimangalo eziningi zithunyelwa ngokwephula amalayisense e-software yomthombo ovulekile.
Law & More ngingakweluleka ngesoftware yomthombo ovulekile. Ngabe uzohlala ungumnikazi wesoftware oyithuthukisile uma usebenzisa isoftware yomthombo ovulekile? Imiphi imigomo nemibandela ongayibeka phansi ukuze usebenzise ilayisense? Ungasifaka kanjani isimangalo lapho ilayisense lakho lephuliwe? Le yimibuzo engaphendulwa omunye wabameli bethu.
Isoftware ayisetshenziswa emahhovisi kuphela, kepha futhi nakwezimboni. Imikhiqizo nemishini ifakwe noma ithuthukiswe ngesoftware. Le software efakwe ngaphakathi ibhalelwe ukulawula imishini noma imikhiqizo. Izibonelo zezinhlobo ezinjalo zesoftware zingatholakala emishini, amalambu omgwaqo nasezimotweni.
Njengoba nje kubalulekile 'software' ejwayelekile, umthetho wesoftware (wezimboni) ubalulekile nakusoftware yezimboni futhi unikeza ngemithetho ebalulekile yabo bobabili abathuthukisi be-software nabasebenzisi be-software. Umkhakha wesoftware wezimboni uthola imali eningi, okwenza ukuthi kubalulekile ukuvikela amalungelo okushicilela afanele.